Mutt, GNU-PGP, iyo Sirta Masonic | Laga soo bilaabo Linux
Mutt, GNU-PGP iyo Sirta Masonic-ka
Boostada aad xigi doontid akhriyi doontaa ayaa la ii soo diray Laasaros, adeegsade GUTL email ahaan. Waxay ahayd hage shaqsiyeed, sida uu ii sheego, si fiican ugu shaqeeyay isaga.
Isticmaalaha caadiga ah ee leh:
PGP-ka ii dhawaaqaya laakiin .. Xitaa ma ogi taas?
Taasi ma aha wax ka badan «Pretty Good Asturnaanta»Waana hab sir ah iimayl in si qarsoodi ah loogu gudbiyo internetka.
Waxaa la isla dhexmarayaa inay jirto madhab qarsoodi ah oo damacsan inay la wareegto adduunka. Mid ka mid ah xubnahan ayaa go'aansaday in e-maylkiisa aan laga akhriyin halkaas, ama in e-maylkiisa aan loo adeegsan doonin injineernimada bulshada, ama in cidna dan ka lahayn waxa ay saaxiibtiis ka hadlayso.
Kuwani waa sababaha macquul ah ee macquul ah laakiin ma luminayaan indhaha in dalal badan, tan loogu dhawaaqi karo inay tahay mid sharci darro ah, oo aan la soo dhoweyn ama la mamnuucin. Horay ayaa lagaa digay, hadaad sameyso waxay kujirtaa halistaada oo iska hubi tan:
Qoraagu mas'uul kama aha xadgudubyada sharciyada ee aad ku fulin karto hirgelinta waxa halkan ku qoran, oo loo fahmay inay yihiin qaab sir ah ama la duubay iyo emayllo leh waxyaabo sharci-darro ah oo la soo saaray ama lagu helay qaabkan.
Buuuuuuuuuuuu… Horaanba waan kaaga baqay oo waan u hogaansamay saraakiisha canshuuraha. Aynu sii wadno "sameynta sayniska"
Mabda'a waa mid fudud.
1- Abuur furaha PGP.
2- Furaha guud u dir qof.
3-In qof uu ku keydiyo furahaaga guud.
4- Waxaad ku qortay lambarkaaga sirta ah.
Waxa ugu horeeya ee ugu horeeya. Hal abuur Furaha sirta ah, adigaa iska leh midka aan cidina haysan. Waxaan tan ku sameeynaa abuurista "labo fure" (lammaane maxaa yeelay waxaa jira laba) shaqsi ahaan iyo dadweyne, laakiin waxaa lagu soo saaraa amarka:
Halkaas hawl ayaa ka bilaabmi doonta halka ay kaa dhigi doonto inaad furaha furato. Haddii aad damacsan tahay inaad qorsheyso sida boostada loogu soo dhaadhicin karo Capitalism, waxaan kugula talinayaa inaad sameyso a lambarka sirta ah sida Eebbe amro.
La dhammeeyay! Ereyga sirta ah ee loo sameeyay cinwaanka tuusuario@yourdomain.org
Haatan aan isku dayno inaan wax sirno, feyl qoraal fiican tusaale ahaan. Waxaan socodsiineynaa amarkan:
gpg --armor -r tuusuario -o monografia.asc -e malvado_plan_B.txt
Hadda sharaxaadda xuduudaha.
«–Armo»Waxay soo saartaa foom la yiraahdo«ASCII xog habeysan»Ama hubka ASCII oo diyaar u ah in lagu soo diro boostada. Dabcan kani waa qashin maxaa yeelay wuxuu xambaarsan yahay dhammaan macluumaadka MIME ee oranaya waa emayl GPG-ga la duubay. Laakiin way kuu fiicantahay inaad fahamto mabda'a.
Hadda, xaaladdan waxaan adeegsaneynaa fureyaga dadweynaha laakiin haddii aan qori lahayn:
Waxaan u baahanahay qofkaas eraygiisa sirta ah, ee uma baahna innaga. Waxaan ku xasuusinayaa inaan helno farriimo lagu qariyey furahayaga guud.
Aan aragno sida ganacsigani noqon doono:
Waxaan u dirnaa lambarkayaga sirta ah qofka nala shaqeeya. Waxaan sidaa yeelnaa.
gpg --export --armor -o clave_publica.asc
Halbeegga «–armor» waa mid aad muhiim u ah, la'aantii hubka ASCII, waxaan kaliya u diri lahayn qulqulka qashinka, oo aan ku fiicnayn heerka boostada, laakiin aad u faa'iido badan heerka feyl.
Hadda faylka ayaa soo muuqan doona dadweynaha_key.asc waana tan fure fure ee aan u dirno la-hawlaha.
Wuxuu amri doonaa amarka:
gpg --import clave_publica.asc
oo waxaan kudaridoonaa furahaaga furahaaga. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad abuurto cod sir ah oo isaga xitaa uusan arki karin; kaliya abuuraha (adiga) oo leh furaha.
Marka la-hawlgalayaasheena ayaa fuliya:
gpg --armor -r frater -o monografia.asc -e malvado_plan_B.txt
iyo faylka monografia.asc Waxay diyaar u noqon doontaa in lagu soo diro furaha furaha si aad adigu kaliya u aragto.
Marka wuu tirtiraa faylka shar_plan-B.txt iyadoo la adeegsanayo habka Gudman oo ah 7 baas oo kuu soo diraya sirta.
Adiga dhinaca halkan ah waxaad ku dejineysaa amarka:
gpg -o planes.txt -d monografia.asc
Waxayna ku weydiin doontaa lambarkaaga sirta ah. Dhibaato sax ah?
Mutt (macmiil iimayl ah oo ku jira boosteejada) noloshaada AAD AAD ayey ufududaysaa, aan aragno sida ay u dhaqanto iyo kartidiisa gaarka ah. Waxaan isticmaalaa nooca 1.5.20 oo ah kan ugu xasiloon sida qoraalkan ah.
Faylka ku jira .muttrc waxaan dhigi doonaa kuwa soo socda.
dhigay pgp_decode_command = "gpg%? p? - passphrase-fd 0? -no-verbose --batch --output -% f" set pgp_verify_command = "gpg --no-verbose --batch --output - - xaqiiji% s% f "dhigay pgp_decrypt_command =" gpg --passphrase-fd 0 --no-verbose --batch --output -% f "set pgp_sign_command =" gpg --no-verbose --batch --output - - -passphrase-fd 0 - hubor --hadal-calaamadeed --textmode%? a? -u% a?% f "set pgp_clearsign_command =" gpg - no-verbose --batch --put - - passphrase-fd 0 - hub --textmode --clearsign%? A? -U% a?% F "dhigay pgp_encrypt_only_command =" gpg --wax soo saar - --armor -r% r -e% f "dejinta pgp_encrypt_sign_command =" gpg - passphrase-fd 0 -batch --quiet - no-verbose --textmode --output - -in sir - saxeex%? a? -u% a? - hubka - marwalba-aamin -r% r - -% f "set pgp_import_command =" gpg --no-verbose --import -v% f "dejinta pgp_export_command =" gpg --no-verbose --export --armor% r "dejinta pgp_verify_key_command =" gpg --no- verbose --batch --fingerpcheck-sigs% r "set pgp_list_pubring_command =" gpg --no-verbose --batch --with-colon s - liistada-liistada% r "set pgp_list_secring_command =" gpg - no-verbose --batch --with-colons --list-sirta-furayaasha% r "dhigay pgp_autosign = haa dhigay pgp_sign_as = youruser set pgp_replyencrypt = haa set pgp_timeout = 1800 dhigay pgp_good_sign = "^ gpg: Saxeex wanaagsan oo ka socda"
Fiiro gaar ah u yeelo safka 4aad ee hoose ilaa kor, waxaa ku qoran:
Halkaas ayuu "ususer" kaaga ku beddelayaa eraygaaga sirta ah ama ka sii fiican ee Aqoonsiga. Si aad u ogaato aqoonsiga liiska furayaashaada.
oo waxay lahaan doontaa wax sidan oo kale ah:
pub   1024D/DE1A6CA5 2010-05-28
uid                  chicho <frater@gran_logia.org>
sub   2048g/0C914E56 2010-05-28
Xaaladdan oo kale lambarkaaga sirta ahi waa «Daabacaad» DE1A6CA5
Hadda Mutt wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo aaladda ugu dambeysa ee shirqoolkaaga qabsashada adduunka.
U dir lambarkaaga sirta ah saaxiibbadaada 'Illuminatis', tan waxaa lagu sameeyaa shaashadda weyn ee Mutt adigoo riixaya isku darka furaha
cararidda + K
Kadib waxaad heli doontaa "aqbasho" meesha aad dhigeyso cinwaanka qofka kula shaqeynaya iyo mowduuca:
"Haye qof walboo ... waxaan u dirayaa eraygeyga sirta ah qofka ila shaqeeya"
Laakiin shakigu wuu soo baxayaa.
"Sidee baan wax uqariyaa?"
Hagaag taasi horeyba way uga sii dhib badneyd. Marka hore wuxuu weydiistaa saaxiibkiis rafiiqa furaha sirta ah ee bulshada iyo markuu haysto, Mutt wuu ogaan doonaa waxa lagu sameeyo. Aynu eegno tusaale.
Marka saaxiibkaa kuu soo diro furaha dadweynaha, Mutt wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad "ku soo dhoofsato". Waad soo dejisaa ka dibna waxaad qortaa farriin Caadi ah.
Ka dib markii uu dhigay dhammaan sirtiisa ugu dhow iyo geesaha uu ku dhejinayo saaxiibtiis, keydso qoraalka oo xir tifaftiraha.
Markay dhuumaha jabto, waxay ku degeysaa shaashadda Mutt halkaasoo ay kuu sheegayso inaad riixdo "y" si aad u dirto. HA DHIIBIN.
Halkaas ayaad ku cadaadinaysaa k waxayna ku siin doontaa fursado dhowr ah. Mid ka mid ah ayaa ah e by Aflaanta Studio Hadday wax walboo hagaagsan yihiin Mutt wuxuu furaa fure fure u ah cinwaanka qofka la shaqeeya oo u dhigma cinwaanka halka loo socdo fariinta iyo BOOM! sir siinta qofka
Waxaad xusuusnaan kartaa in "msmtp-listqueue.sh" uu leeyahay halbeegga "Nooca-Nooca:" iyadoo taas aad ku ogaanayso haddii ay ku tiraahdo wax la mid ah "codsi / pgp-ecryptes" in mailku sir yahay.
Xumaanta ka gudub, waa saxiixa PGP. Tan waxaa loo isticmaalaa sidii wax wax lagu shaabadeeyo oo sax ah oo ANA fariin kama dhigin fariinta.
Si tan looga sameeyo shaashadda halka aan riixayo k halkii aad riixi lahayd e Solo
riix s Saxeex oo soo saar saxeexa saxeexa ee ku yaal emaylka.
Hubaal! Evolution keligiis ayuu sameeyaa keligiis iyo Thunderbird leeyahay plugin.
La cusbooneysiiyay: Qoraaga ayaa daabacay maqaalka asalka ah uu ku qoray boggiisa gaarka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Mutt, GNU-PGP iyo Sirta Masonic-ka
Maqaal aad ufiican elav ... inkasta oo qaybaha "qosolka" aysan ku dhicin nimcada
Hagaag, maqaalka runtii aniga maahan oo waxaan isku dayay inaan ixtiraamo maqaalka asalka ah sida ugufiican ee suuragalka ah, taas oo xoogaa kayar.
Fadlan @elav, su'aashaydu mowduuc bay ka jirtaa, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa dhaca ee aynaan ku xidhi karin websaydhka GUTL.
Aad baad u mahadsantahay hadaad kajawaabi lahayd su'aashayda.
ISP-ka bixiya martigelinta GUTL iyo websaydhada kale dhibaatooyin ayaa haysta .. 😉
Si aad uqarxiso khadka tooska ah ugana baaraandegto emayllada kujira internetka, waxaan u isticmaali karnaa tan:
deji pgp_replyinline = haa
deji pgp_autoinline = haa
Si kastaba ha noqotee, kala-saarista khadadka qadka ayaa wali ah qaniinyo. Haddii aad eegto dukumiintiyada rasmiga ah, dhammaantood waa sixir leh procmail, laakiin tani way ka fududdahay:
fariin-jillaab '! ~ g! ~ G ~ b «^ —– BILAABKA PGP (SAXIIX)
Wax kale, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto madax si aad ugu sheegto qof walba halka uu joogo; saxiixaaga:
dhigay my_header = »X-PGP-Key: h ttp: //tuserver/~user/clave.asc»
Ku jawaab låzaro
Waxaan iskudayey inaan ka nadiifiyo lifaaqyada carrabka muddo dheer laakiin ma awoodo, tusaale ahaan si aan u arki karo sawir lifaaqan waxaan furayaa emaylka waxaan galayaa eraygayga sirta ah ee PGP ka dibna waxaan riixayaa xarafka v waxaan helayaa sawirka foo.jpg.gpg goortaana aan doonayo inaan furo ma aqaano ma ii sheegi kartaa: Ma jiro galitaan u dhigma faylka mailcap. U fiirsashada sida qoraalka. Taasi waxay ku dhacdaa oo keliya lifaaq kasta oo ku yimaada sirta, muttrc-kayga waxaan haystaa kuwan soo socda
dejiso pgp_sign_as = 0xXXXXXXXXX
dejiso pgp_timeout = 3600
dejiso crypt_verify_sig = haa
dhigay crypt_autopgp = haa
dejiso pgp_auto_decode = haa
deji pgp_sign_command = »gpg –clearsign»
message-hook '! (~ g | ~ G) ~ b »^ —– BILOW \_ PGP \_ (SAXIIX \_)? FARIIN» »« exec check-traditional-pgp »
Ku jawaab alfonsin
Waxaan u arkaa qoraalka mid aad u xiiso badan, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan isku dayayaa inaan sameeyo berri.
Mutt aad ayuu u dhakhso badan yahay marka la barbar dhigo Pine. Waxa aan runtii u baahanahay waa
asxaabta ama xiriiriyeyaasha doonaya inay tijaabiyaan. Way fiicnaan laheyd in qalab lagu dhex helo
gmail, hotmail, iwm oo saamaxay in sidaa la sameeyo.
Sida loo abuuro foomamka (PDF) qoraaga LibreOffice
Tallaabooyinka ugu horreeya ee mashruuca: 10 daqiiqo oo lala socdo DesdeLinux